Xildhibaanada Koonfur Galbeed Oo Diyaarad Muqdisho Ku Soo Daadgureynaysa -
HomeWararkaXildhibaanada Koonfur Galbeed Oo Diyaarad Muqdisho Ku Soo Daadgureynaysa
Xildhibaanada Koonfur Galbeed Oo Diyaarad Muqdisho Ku Soo Daadgureynaysa
Wararka Laga helayo Magaalada Baydhaba ee Caasimadda Mamulka K/Galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in maanta Markale diyaarad ay kasoo qaaday Magaalada Baydhabo tiro xildhibaano ah oo ka tirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Qaar ka mid ah Mas’uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa sheegay in xildhibaanada looga yeeray Magalada Muqdisho Inkastoo aan la garanaynin sababaha loogu yeeray balse waxa la tuhmayaa in madaxda Villa Somaliya ay ka danbeyaan ayagoo Doonaya In ay dorashada ay fara geliyaan.
Dhinaca kale Shalay tiro xildhibaano ah oo taageersanaa Shariif Xasan ayaa laga soo qaaday Baydhabo, waxaana ay soo gaareen Muqdisho,iyadoona qaarkood xaqiijiyay in ay Casuumaad ka heleen Madaxda Sare ee dalka.
Maxamed Mursal Sheekh Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xalay hoygiisa ku qaabilay Xildhibaanadii laga soo qaaday Shalay Magaalada Baydhabo.
Kulankan oo la sheegay inuu ahaa mid albaabada u xirnaa ayaa looga hadlay doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed oo 17-ka bishan November ka dhaceysa magaalada Baydhabo.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Xildhibaanadan ka tirsan Koofur Galbeed ay kulamo la qaadan doonaan Mas’uuliyiinta kale ee dowladda iyo Xildhibaanada Labada aqal.
Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed oo ah mid xasaasi ah ayaa ololahooda wuxuu noqday mid Muqdisho iyo Baydhabo si weyn uga socdo, waxaana la sheegayaa in dowladda Federaalka ay saameyn ku leedahay doorashada, maadaama ay wadato Musharaxiin gaar ah
Wararka ayaa sheegaya in Xildhibaanada uu la kulmay Guddoomiye Mursal ay gaarayaan illaa 20 meeyo Xildhibaano, kuwaasoo ka soo horjeeda Shariif Xasan.